Somalia online: WAR DEG DEG AH: Dagaal qaraar oo Beled Xaawo ka socda iyo Mujaahidiinta oo gudaha magaalada galay.
WAR DEG DEG AH: Dagaal qaraar oo Beled Xaawo ka socda iyo Mujaahidiinta oo gudaha magaalada galay.
Monday, 14 March 2011 18:58 Dagaallo culus ayaa goordhaw ka bilaawday degmada Beled xaawo ee wilaayado Gedo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo Itoobiyaan ah iyo Maleeshiyaad Soomaali ah. Ciidamada Mujaahidiinta Soomaaliya ayaa laxaqiijiyay in ay gudaha u galeen Beled Xaawo oo hadda inteeda badan lagala wareegay ciidanka Itoobiya iyo Maleeshiyaadka cadawga laakin dagaal ayaa socda .
Hugunka Rasaasta iyo madaafiic ayaa isqabsatay magaalada oo idil ilaa iyo halka loo yaqaan Kastamka Mandheera, saraakiisha Shabaabul Mujaahidiin ayaa noo xaqiijiyay in ciidankoodu magaalada galeen.AmiirNuur Media kala soco wixii soo kordha